Fally Guys dia efa novolavolaina tamin'ny Android, na dia ho tonga any Shina | Androidsis
Fall Guys dia hanomboka amin'ny finday, fa any Shina aloha
Fall Guys lasa lalao lamaody sy youtuber maro olo-malaza no nirohotra nankao aminy mba hanao lalao mahafinaritra. Fantatsika izao fa halefa amin'ny finday izy io, na dia ho an'i Shina aza aloha.
Royal royale izay mitana toetra mahafinaritra isika Izy ireo dia tsy maintsy ho hita manohitra mpilalao marobe hafa izay manandrana hahatratra ny faran'ny tsipika fahatongavana aloha. Fonosina fizika fizika zavatra sy sakana, tsy afaka miandry ny hanandrana azy amin'ny Android iray andro isika.
Ilay nitaingina ny herinandro lasa teo rehefa nisy horonantsary niseho izay ahitanao olona milalao Hianjera ry zalahy avy amin'ny finday avo lenta. Nifarana tao aminay ny fikorontanana rehetra fa fantatsika fa misy ny kinova finday efa novolavolaina, na dia ho tonga any Chine aza izy io.
Ny orinasan-kilalao sy fialamboly sinoa Bilibili dia niantoka ny zon'izy ireo hamoaka kinova finday an'ny Fall Guys: Ultimate Knockout any China.
Navoaka ho an'ny PC sy PS4 ny lalao tamin'ny 4 Aogositra 2020 ary lasa nalaza be izy io.#FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5
- Daniel Ahmad (@ZhugeEX) Aogositra 22, 2020
Bilibili dia nanome antoka an'izany no voalohany namoaka ny kinova finday an'ny Fall Guys any Sina, orinasa iray lalao video izay malaky nitondra ity lalao tena nahomby ity tamin'ny PC sy ny PS4.
Un lalao izay navoaka tamin'ny 4 Aogositra ary tao anatin'ny andro vitsivitsy dia nanomboka nahita ny sasany tamin'ireo youtuber malaza indrindra nilalao lalao tena adala sy mahafinaritra izahay. Ity adjectif farany ity indrindra no maneho tsara izay ankafizin'ny mpilalao maro manerantany, fahafinaretana madio ho an'ny lalao feno fizika zavatra.
Lazainay izany satria hanao izy ireo ny sakana rehetra sy ny lalao mini ireo izay mamela antsika hankafy traikefa an-tserasera tsy misy toa izany ary miady amin'ireo mpilalao am-polony maro isika. Izany hoe, royale ady iray manontolo hanosika, hitsambikina ary ho mpiara-miasa mihitsy aza mba hahatratra ny tanjona farany handalo ilay andiany mandra-pahatongantsika ho mpandresy tanteraka.
Fantatry ny Devolver Digital fa ity fahombiazana tampoka ity dia nentina tamin'ny finday Mety ho gisa volamena io, koa toa ny zavatra rehetra dia handray ny dingana tsara mba hahatonga azy io ho lavorary. Anjarantsika izao ny manana faharetana kely. Raha mila lalao mitovy amin'izany amin'ny mpilalao 4 amin'ny Internet ianao, Olombelona: Fall Flat.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Fall Guys dia hanomboka amin'ny finday, fa any Shina aloha
Havaozina tanteraka ao anaty interface tsara i Firefox mba hanomezana traikefa ho an'ny mpampiasa vaovao
Android Studio dia nohavaozina mba hanampiana fanohanana nohatsaraina ho an'ny smartphone finday